Papa François : “Mba hifanakalozan-kevitra ny ady amin’ny ratran-kolikoly” | NewsMada
Papa François : “Mba hifanakalozan-kevitra ny ady amin’ny ratran-kolikoly”
Anisan’ny ady lehibe ny ady amin’ny kolikoly. Mba hifanakalozan-kevitra fanohizana ny ady amin’ny ratra ami’ny kolikoly, raha ny hafatry ny papa François.
“Mba hahazoana manorina tetezan’ny fifanakalozan-kevitra amin’ny fanohizana ny ady amin’ny ratra amin’ny kolikoly izao fitsanganan’ny Mpiandry ondry tsara izao, ary ho fikarohana vahaolana azo antoka sy milamina amin’izay tsy mampitovy hevitra. Mba hahazoana miroso sy manamafy ny andrimpanjakana demokratika ao anatin’ny fanajana tanteraka ny fanjakana tan-dalàna koa.”
Hafatra Paka avy amin’ny papa François, afakomaly, io. Ankehitriny, mandray eo an-tsorony ny rahalahy sy anabavy mijaly noho ny ratsy amin’ny endriny samihafa ny Mpiandry ondry tsara, izay nitsangana tamin’ny maty. Mitady ireo mijaly noho ny fitokana-monina sy ny fanilihana Izy.
Raisiny an-tanana ireo iharam-pahavoazana noho ny fanandevozana amin’ny endrika taloha sy vaovao: fampiasana tsy araka ny maha olona, fanondranana an-tsokosoko, fitrandrahana sy fanavahana… Miara-dalana amin’ireo mandao ny taniny noho ny ady Izy, na noho ny fanafihan’ny mpampihorohoro, ny hanoanana, ny famoretan’ny mpitondra.
Miara-dalana ny fahamarinana sy ny fandriampahalemana
Miara-dalana amin’izay mitady ny fahamarinana sy ny fandriampahalemana Izy, ary mankahery ireo tomponandraiki-pirenena hialana amin’ny fiitaran’ny ady ary ny hampiatoana ny fanondranana fitaovam-piadiana. Amin’ny fomba manokana, tohanany ny ezak’ireo mitondra fankaherezana ho an’ireo mponina sivily any Syrie iharam-pahavoazana noho ny ady, omeny fandriampahalemana ny any Moyen Orient, toa an’i Iraka sy Yémen.
Tsy mandao ny mponina any Soudan Atsimo Izy. Eo koa ny any Somalia, Repoblika demokratikan’i Congo, mijaly noho ny ady ary mihamafy noho ny hanoanana mamely ny faritra sasany any Afrika. Nasian’ny papa François teny koa ny any Amerika Latinina, Ukraine…
Hameno ny tsodrano ho an’ny kaontinanta eoropeanina anie Izy, ary hanome fanantenana ho an’ireo mandalo fahasahiranana, indrindra ireo tsy manana asa ho an’ny tanora.
“Efa nitsangana tokoa ny Tompo, araka izay nolazainy. Nandresy ny haizin’ny fahotana sy ny fahafatesana Izy, ary manome fandriampahalemana amin’ny fotoantsika“, hoy ny hafatra.